THEIHTLEI – Page2– Dohphit
Pa (mushroom) athatnak
June 8, 2020 dohphit.com 0
Paleng rang le pamintial cu thluak retheih, thluak bat adamter, thazaangapek leng ah lungthin hnaangamter. Cun nunkhuaasauter i, tha […]
Baibal ah Theih Herh Ngaimi Panga
June 7, 2020 dohphit.com 0
Baibal ah Theih Herh Ngaimi Panga Baibal timi bia fiang cu Greek holh “biblion” inara mi s iiasullam cu Cauk ti […]
Mirang biafang ‘virus’ le ‘bacteria’ hi zawtnakachauhtertu le akarhtertu veve an si nain an i khat lo. ‘Virus’ cu amah teinanung […]
May 27, 2020 dohphit.com 0
အသားအရေကို ပုံမှန်လည်း Skin care ပါရဲ့။ ဝက်ခြံတွေက ပျောက်သွားလိုက် ပြန်ပေါ်လာလိုက်ပဲ ဆိုတဲ့သူလေးတွေရှိလား……. ဒီတစ်ခေါက်တော့ Skincare ရဲ့သားနဲ့ ဝက်ခြံ ဘာလို့ မပျောက်တာလဲ ဆိုတာကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း အဖြေထုတ် ကြည့်ရအောင်။ Skin care တိုင်း ဝက်ခြံ ကင်းသလား……… အသားအရေကို ပုံမှန် ထိန်းသိမ်းမှု […]
May 18, 2020 dohphit.com 0
ကိုက်လန်၏ အကျိုးကျေးဇူးမျာ: အစိမ်းရောင်ရှိပြီး ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့ စားသောက်ဖွယ်ရာ ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေထဲမှာတော့ ကိုက်လန်ဟာ ထိပ်တန်းစာရင်းဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျန်းမာရေးအတွက် အထောက်အကူပြုတဲ့ အာဟာရဓာတ်တွေ ပါဝင်တဲ့အပြင် ဆေးဖက်ဝင်ဂုဏ်သတ္တိလည်း ရှိပါတယ်။ ဒီဆောင်းပါးမှာ ဆက်လက်ဖော်ပြမှာကတော့ ကျန်းမာရေးနဲ့ ပတ်သက်လို့ ကိုက်လန်၁ီကနေ ရရှိနိုင်မယ့် အကျိုးကျေးဇူးတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ၁။ အာဟာရဓာတ်သိပ်သည်းခြင်း ကိုက်လန်ကို ဂေါ်ဖီအုပ်စုဝင် အပင်ဖြစ်ပြီး […]
May 14, 2020 dohphit.com 0
Naupawi mi nu nih Sangphaw (papaya)aei ah nauarawk taktak maw? An chim lengmang,cun Ca zongah an tial lengmang mi cu Nau […]
Kemit phin zawtnak (Gout)
May 3, 2020 dohphit.com 0
Kemit phin zawtnak (Gout) Gout timi kemit phin zawtnak timi hi vawleicung ahatam ngaingai. Laimi tampi zong nih ngeih asi. A hmasabik i […]
zeitindah Hmurhuh (mask) kan hmanning asi lai By Dr. Chan Bawi Lian
Hmurhuh (mask) hi kan hman, kan i huh cio ko nainaningcang te kha kan rak palh theu tawn. atu mizapi nih kan i […]
May 2, 2020 dohphit.com 0
၁။ လူရှေ့သူရှေ့ မရှောင် အိမ်ထောက်ဘက်ကို အပြစ်တင်ခြင်း ********************** လင်နဲ့မယား လျှာနဲ့သွားပါ။ အိမ်ထောင်သက် ရလာတာနဲ့ အမျှ အထစ်အငှော့လေးတော့ ရှိတတ်ကြပါတယ်။ လူရှေ့သူရှေ့ မရှောင် တဘက်သားကို အပြစ်တင် ရန်ထောင်ရင်တော့ ရန်ပွဲ ဖြစ်လာမှာပါ။ အဲလိုရန်ဖြစ်တာ ပြဿနာကို ပြေလည်အောင် မဖြေရှင်း နိုင်တဲ့ […]
Hi vawlei kan nun chungah tangka lawng te kan i bochan peng ko asi ahcunatanglei kan langhter mi hna hi kan sung ko […]
THINRIMNA/THINURNA HNEH THEIH DAN